Ibali lethu-iShanghai Chigong Industrial Co., Ltd.
Umzi-mveliso wethu wetyathanga waqala kwiminyaka engama-30 eyadlulayo usenza ikhonkco lentsimbi ekumgangatho ophantsi ngeenjongo zaselwandle kunye nokuhombisa, ngelixa uqokelela amava, abasebenzi kunye netekhnoloji malunga nemathiriyeli yetsheyini, ukuwelda ngetsheyina, unyango lobushushu kunye nokusetyenziswa kwekhonkco kumashishini ahlukeneyo.Amanqanaba ekhonkco ayegubungela iBanga lama-30, iBanga lama-43 ukuya kutsho kwiBanga lama-70. Oku kwakungenxa yokunganyangeki kwentsimbi yokusila yaseTshayina ekuphuhliseni amandla aphezulu entsimbi yealloyi, kodwa ngentsimbi yekhabhoni kuphela kwishishini lokwenza ikhonkco.
Oomatshini bethu bokwenza amatsheyina babesenziwa ngesandla, kwaye itekhnoloji yonyango lobushushu yayisabambeka.
Nangona kunjalo, ukuzimisela kwethu kunye nothando lwethu lokwenza ikhonkco lentsimbi ejikelezileyo lisincedile ngeempumelelo ezibonakalayo ngaloo minyaka:
Umgangatho Kuqala ukusukela ngomhla woku-1 womzi-mveliso wethu ukhona.Siyazi kakuhle ukuba ikhonkco lomelele njengelona khonkco libuthathaka, ngoko ukwenza ikhonkco ngalinye libe semgangathweni lithathe iminyaka engama-30 ukuza kuthi ga ngoku.
Utyalo-mali lwezixhobo lubalele ngaphezulu kwe-50% yenzuzo eseleyo yefektri iminyaka.
Ukusebenza kunye neeyunivesithi kunye namaziko kwi-welding, unyango lobushushu kunye novavanyo lwamatyathanga ukuya kumgangatho ophezulu.
Qhubeka ufunda malunga neemfuno zeemarike zasekhaya kunye naphesheya malunga neemodeli zamakhonkco, amabakala, usetyenziso, i-R&D, ukubonelela okhuphisana nabo, njl.
Xa ukhenketha umzi-mveliso wethu wamakhonkco namhlanje, yindibano yocweyo ephuculweyo enomatshini wokwenza iirobhothi ezizeleyo zamva nje, ukucima ubushushu obuphambili kunye neziko lokutshisa ubushushu, oomatshini bovavanyo loxinzelelo lwetsheyini ezenzekelayo, iiseti ezipheleleyo zekhonkco lekhonkco kunye nezixhobo zovavanyo lwemathiriyeli.
Enkosi kuphuhliso lobunjineli boomatshini baseTshayina, kunye nezixhobo zentsimbi zaseTshayina i-R&D yezixhobo eziphezulu zentsimbi yealloy (MnNiCrMo), siye saziseka kakuhle uluhlu lweemveliso zethu okwangoku nakwixesha elizayo, oko kukuthi, umgangatho kunye namandla aphezulu angqukuva amakhonkco entsimbi yekhonkco:
Amalahle / ukukrala kwemigodi & inkqubo yokuhambisa (amatyathanga nge-DIN22252, ubukhulu ukuya kwi-42mm dia.), Kubandakanya i-Armored Face Conveyors (AFC), i-Beam Stage Loaders (BSL), umatshini wentloko yendlela, njl.
Ukuphakamisa nokusawula izicelo (amatyathanga eBanga lama-80 kunye neBanga le-100, ubukhulu ukuya kuthi ga kwi-50mm dia.),
Ezinye izicelo ezicela umngeni ezibandakanya izinyusi zebhakethi kunye namatyathanga okuloba (ngeDIN 764 & DIN 766, ubukhulu ukuya kwi-60mm dia.).
Imbali yethu yeminyaka engama-30 yokwenziwa kwetsheyini lentsimbi engqukuva ayikabikude kwasekuqaleni, kwaye kuninzi ekufuneka sikufundile, ukwenza kunye nokwenza ……sijonga indlela yethu yekamva ikhonkco elingenasiphelo kunye nekhonkco ngalinye libe nomnqweno kwaye umngeni, kwaye sizimisele ukuwuthatha kwaye siwuqhubele phambili:
Ukugcina inkqubo yolawulo lomgangatho ophezulu;
Ukugcina utyalo-mali olukhulu kubuchule kunye nohlaziyo lwezixhobo;
Ukwandisa kunye nokwandisa ubungakanani bekhonkco kunye noluhlu lwebakala ukuhlangabezana neemfuno zemarike esele zikhona, kubandakanywa, iBanga le-120 elijikelezayo lekhonkco lekhonkco;
Ukwabelana nabathengi bethu, abasebenzi kunye noluntu ngakumbi ngaphaya kwamakhonkco ekhonkco, oko kukuthi, impilo, ukhuseleko, usapho, amandla acocekileyo, ubomi obuluhlaza…
Umbono weSCIC kunye noMsebenzi
Uqoqosho lwehlabathi belukwixesha elitsha, lizele ngamaqumrhu & namagama e-Cloud, AI, E-commerce, Digits, 5G, Life Science, njl. njl. ukuphila ngcono;kwaye ngenxa yoku, siya kuhlala sidlala indima yethu engundoqo kodwa yanaphakade ngembeko nokuzimisela.
Ukuqokelela iqela elinomdla nelinobuchule,
Ukuhambisa iindlela zobugcisa bemeko kunye nolawulo,
Ukwenza ikhonkco ngalinye lekhonkco libe nobungakanani kwaye lomelele.